EGWUREGWU KACHA NJỌ NKE 2018: TOP 10 NA NKỌWA NA FOTO - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
2018 nyere ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa ọtụtụ ọrụ na usoro mgbanwe. Otú ọ dị, n'etiti egwuregwu ndị ahụ na-ekwe nkwa bụ ndị na-enweghị ike inye ndị na-egwu egwuregwu aka. Nnyocha ndị a na-akatọ na ndị na-adịghị mma na-adaba dịka ọka, ma ndị mmepe gbalịrị ime ngọpụ na ime ka ihe ha kere dị ọcha. A ga-echeta egwuregwu iri kachasị njọ nke 2018 maka nchịkọta, njirimara na-adịghị mma, egwu egwuregwu na-enweghị isi na enweghi zest.
Onye na-enyocha isi: Otu esi ekwu okwu na ụmụ agbọghọ
Nwoke dị jụụ
Jagged Alliance: Iwe!
Ọbụna n'azụ okpu agha a, o yiri ka àgwà ahụ ọ dị mwute maka ohere na ohere ndị furu efu.
Ụlọ ọrụ Bethesda gbalịrị ịchọta ụzọ ọhụrụ mmepe nke usoro Fallout. Akụkụ nke anọ gosiri na otu onye na-agba egwu otu egwuregwu nwere ihe RPG dị nnọọ ka onye bu ya ụzọ ma na-ede oge na-enweghị ọganihu ọ bụla. Ịga n'ịntanetị adịghị ka ihe ọjọọ dị otú a, mana na mmepe iwu ihe ọhụụ mebiri ihe. Ụgha 76 bụ isi nkoropụ nke afọ ahụ. Egwuregwu ahụ gbahapụrụ akụkọ akụkọ, kpochapụrụ ndị NPC nile, na-etinye ọtụtụ ihe ochie na nsị ọhụrụ, wee kwụsịkwa ịdị ndụ na agha ụwa nke agha nuklia bibiri. Ewoo, Ụgha 76 dara dịka ọ dịghị ihe egwuregwu ọ bụla n'ime usoro ahụ dara. Ndị na-emepe emepe na-anọgide na-agbanye aka, ma mgbalị ha nwere ike ịbụ n'efu, n'ihi na ndị egwuregwu ahụ ejiriworị mee ka njedebe ahụ kwụsị, ụfọdụ n'ime usoro ahụ.
Ikpe ahụ mgbe ọbụna ọnọdụ co-op adịghị echekwa
Mgbe oru ngo AAA kwadebere maka ịtọhapụ, ị na-atụ anya mgbe niile ihe buru ibu na oke. Otú ọ dị, State of Decay 2 ọ bụghị nanị na ọ kwụsịrị ịkwado ụdị aha ahụ dị elu nke ugboro atọ, ọ gbakwara njọ karịa nke mbụ na ebe ụfọdụ. Ihe oru ngo bu ihe nlere anya nke ndughari na enweghi ezi echiche. Ogbugbu a na-eme banyere ihe ndị mere n'oge gara aga mere ka ndị mmadụ gbanwee ya, ma ọbụnadị na ọ pụghị ịchụpụ State of Decay 2 na ọkwa dị elu. Ọ bụrụ na anyị tụfuo njirịta ahụ na akụkụ mbụ, mgbe ahụ, anyị nwere egwuregwu dị egwu, nke gbagọrọ agbagọ ma dị egwu maka ọdịnaya, ebe ị na-echeghị na ị ga-echere ogologo oge nke egwuregwu.
Ikwesighi iji ihe di iche iche nke onye isi na ndu gi, ma i ghaghi iguzo n'ihu nwa nwanyi dika egwuregwu n'ihu ndi na-egwu egwu.
Orughi oru ngo nke ndi mmadu nwere ike ighota ihe omuma, ma okwu nke ikwurita uka na umuaka iji nwee mmekorita yiri ihe na adighi nma nye otutu. Eziokwu, ọzọ, mmejuputa mmejuputa. Ndị na-egwu egwu katọrọ ọchịchọ nke ọchị oge na mmekọahụ, na obere mgbanwe, dịka ọ gbanwere, bụ ntu ikpeazụ n'ime igbe ozu nke simulator.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ bụ ezie na ọtụtụ nchịkọta, akụkụ nke abụọ nke ọrụ ahụ adịghị adị ogologo iji pụta: mgbe ọnwa isii gasịrị, otu ihe mepụtara, nke chịkọtara nyocha dị njọ karịa nke mbụ.
Ahụhụ dị anya site na egwu egwu ndụ, ma na lanarị na egwu
Ọ na-esi ike ịkpọ oku na egwu. Nke a bụ ọrụ nke nwere nnukwu ikike nke a ghaghị iburu n'obi. Uzo anya, eluigwe na ala, echiche mara mma banyere nkpuru obi ndi nwere ike idozi n'ime aru - ihe a nile nwere ike iguzo n'ime egwu egwu, ma o buru ihe ojoo na ihe efu. Ndị na-egwu egwu na-eme mkpesa banyere egwuregwu na egwu na-agba ume. Ihe oru a adighi edekorita ya: o buru oke egwu, obughi ihe siri ike idi ndu, nke bu ihe efu maka egwu egwu. Na saịtị Metacritic, e nyere ndị ọrụ Xbox ọnụ ọgụgụ kasị elu - 39 n'ime 100.
Ndị mmepe ARK agbalịwo ịmepụta ọrụ kachasị mkpa, ọbụna maka ịnweta ngwa ngwa
Ọ dịghị mma ịkatọ egwuregwu ahụ na mbido ngwa ngwa ma gbakwunye ya n'ụdị elu a, ma ọ dịghị mfe ịgafe Atlas Ee, nke a bụ MMO zuru ezu na nke na-ezughị ezu, nke sitere n'ụbọchị mbụ nke ọhụụ na steam mere ọtụtụ iri puku ndị omempụ gbawara na iwe: nke mbụ, ebudoro egwuregwu ahụ ruo ogologo oge, mgbe ahụ achọghị ịhapụ menu nhọrọ, ma gosipụta njedebe dị egwu, ụwa efu, ụyọkọ chin na oké osimiri nke nsogbu ndị ọzọ. Ọ na-anọgide na-achọ ka ndị na-eme egwuregwu na-enweghị oge iji laghachi Atlas, ndidi, na ndị mmepe - ọdịmma.
Ọ bụghị nke miri emi, ọ bụghị ezughị ezu, ọ bụghị nke zuru oke - iji nweta ndepụta nke egwuregwu kachasị njọ
Enweghị ike ịmepụta echiche dị ukwuu maka ndụ nwere ike ịkpọ ihe otiti nke afọ a n'etiti ndị mmepe. Ya mere, a ma ama Square Enix, ya na Human Head Studios, mgbe ọ na-emepụta The Quiet Man, lebara anya na isi ihe egwuregwu ahụ, àgwà ntị chiri, mana echefuru banyere egwuregwu.
Onye ọkpụkpọ ahụ na-ahụ ụwa gbara ya gburugburu n'otu ụzọ ahụ dị ka onye bụ isi, ma enweghi ụda dị nso n'etiti etiti ahụ amalitelarị iju, karịa ka ọ dị ka ọdịdị mbụ.
Isi akụkọ nke mmekọrịta dị n'etiti agwa ahụ, onye hụrụ ya n'anya na onye ohi n'ime mkpuchi ahụ na-agbaji, ya mere, ndị egwuregwu maka ọtụtụ akụkụ aghọtaghị ihe na-eme na ihuenyo ahụ. Ma ọ bụrụ na ndị mmepe agabigawo na mgbagwoju anya, ma ọ bụ na ha mere ihe efu. Ndị egwuregwu kwetara na nke abụọ.
Ọbụna ezigbo football gbanwere ọtụtụ mgbe karịa usoro FIFA.
Ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na ị hụlarị ọrụ ahụ site na EA Sports na ndepụta nke egwuregwu kacha mma n'afọ. Ee, a kewara ndị egwuregwu ahụ gaa n'ogige abụọ: otu onye nwere mmasị na FIFA 19, ebe ndị ọzọ na-akatọ ya n'enweghị obi ebere. A pụkwara ịghọta nke ikpeazụ a, n'ihi na site n'afọ ruo n'afọ, ndị Canada sitere na EA na-enye otu otu egwuregwu simik ahụ, na-ekpugharị ya nanị ihe ngosi ọhụrụ, na-eme ka mmelite na nnyefe nke menu nhọrọ dị. Mgbanwe dị ịrịba ama, dịka ntụgharị mkparịta ụka ọhụrụ na ọnọdụ akụkọ ihe mere eme, ezughị ezu iji mezuo ndị egwuregwu, karịsịa ndị na-eme mkpesa banyere ọtụtụ ederede ruo ọtụtụ afọ. FIFA 19 na-akpọ ha asị kpamkpam. Ihe edemede nwere ike ikpebi ihe ga-esi na nkwurịta okwu siri ike, mee ka ndị ọrụ gị kwusi, na onye ọkpụkpọ bọlbụ na-eme ka ọ ghọọ Leo Messi ma mee ihe mgbaru ọsọ, ebe ọ gafere ihe nchebe niile. Kedu otutu irighiri akwara ....
Valve na-aga n'ihu inweta ego n'aka ndị na-eme egwuregwu, ọbụna na egwuregwu akwụ ụgwọ
Egwuregwu vidio akwụ ụgwọ site na Valve na ngwugwu dị oke ọnụ - nke ukwuu na ụdị otu nwoke a maara nke ọma. Ndị mmepe ahụ ewepụtawo ọrụ nke dabeere na ụwa Dota 2 na, o yiri ka a ga-atụ anya na ọ ga-akụ ndị jackpot, ndị na-adọta ndị MOVA a ma ama na ndị na-eri Blizzard Hearthstone. Ihe mmepụta ahụ bụ ọrụ na-enye onyinye (na-enweghị etinye ego na-enweghị isi, enweghi ike ịkwakọta ọnụ ụlọ), ígwè ọrụ dị mgbagwoju anya na ezighi ezi zuru ezu.
Ọtụtụ ndị na-atụ egwu mgbanwe, na DICE, o doro anya na nke a bụ isi phobia
Ọ dị nnọọ ịtụnanya mgbe ndị mmepe na-arịọ mgbaghara n'ọdịnihu maka ọdịdị nke ọrụ ahụ tupu a hapụ ya. Tupu mwepụ nke Agha 5, DICE rịọrọ mgbaghara nke ukwuu ndị egwuregwu ahụ. Ọ bụghị naanị na ndị mmepe anaghị egbochi ibelata egwuregwu ochie ahụ, n'ihi ya, ihe ọ bụla ọzọ wetara mkpọ ọhụrụ, mee ka ndị egwuregwu nwee ụjọ na ọtụtụ ndị na-eme mkpọtụ, ọ bụghịkwa ihe ọhụrụ ọ bụla kpatara - usoro 1 ka dị n'ihu anyị, ma na ọhụrụ nhazi
Ozugbo onye na-arụ ọrụ siri ike na-arụ ọrụ siri ike aghọwo ihe na-agwụ ike-site-nzọụkwụ clicker
Usoro ntụrụndụ na-adabere na-adighi adọta ndị ọrụ nke oge a. Ihe oru ohuru ohuru nke oma na nke a bu Xcom, ma ndi na-eṅomi ya achutaghi aha. Jagged Alliance bụ usoro ntanetị nke usoro ntụrụndụ na-ejikwa njikwa otu na iche echiche site na nke ọ bụla. N'eziokwu, akụkụ ọhụrụ nke ọnụ! kpam kpam adịghị amasị ndị egwuregwu. Ọrụ ahụ nwetara akara dị ala site n'aka ndị nkatọ ma nwee aha ọma nke onye na-amanye onye na-amu amu. O yighị ka ndị na-achụso ihe mgbaru ọsọ dị otú ahụ.
N'afọ 2018, ọtụtụ ọrụ ruru eru bịara, ma ọ bụghị egwuregwu niile nwere ike ịnweta otuto nke ndị nkatọ na ndị ọrụ. Žf] d naenweghŽ ihe] b la nke na] gaghŽ ekwe omume ichefu] tt ihe dŽ icheiche. Anyị nwere ike na-atụ anya na ndị mmepe ga-arụ ọrụ na nkịta ma nweta nkwubi okwu, nke mere na na ọbịbịa 2019, ha ga-enye ndị fan nke ntụrụndụ ntụrụndụ n'ezie egwuregwu dị elu.